14 Horumar ee Saameyn ku yeelan kara Suuqgeynta Emailkaaga ee 2015 | Martech Zone
Sidoo kale email-ka jawaabta leh, tiknoolajiyada ka dambeysa emaylka wax badan iskama badalin tobankii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah dib-u-soo-celinta ugu xoogan ee maalgashiga suuq-geynta, suuqleydu waxay arkayaan soo-laabasho weyn markii ay si buuxda uga faa'iideysanayaan tiknoolajiyada tallaabada ay u dirayaan farriinta ay qaybinayaan.
Halkan waxaa ah 14 Horusocod ee Teknoolojiyadda Kuwaas oo Saameynaya Suuqgeynta Emailka
Shakhsiyeynta waqtiga-dhabta ah iyada oo ku saleysan xogta marinka kanaalka.
Xog weyn ilaha ayaa quudin doona waxyaabaha saadaalinta iyo macnaha guud ee emaylka.
Fariin isku dhafan xeeladaha u dhexeeya emaylka iyo suuqgeynta bulshada.
hashtag Isticmaalka khadadka maaddada emaylka ayaa sii kordhaya.
HTML hagaagtay la macaamilka macaamiisha ayaa saameyn ku yeelan doonta sida aan u qaabeyno una dirno emayllada.
qalabaynta Suuq waxay sii wadi doontaa inay aragto soo-celinta kororka ee maalgashiga.
Wicitaanada Caqli-ku-Dhaqaaqa khadadka maadooyinka waxay abuuri doonaan sicirro furfuran oo ballaaran.
Soo Celinta Mawduuca iyo ka-koobnaanta nuxurka waxay ku dari doontaa qiimaha macaamiishaada.
Beegsiga yar-yar oo leh kala sooc iyo shakhsiyeyn ku saleysan waxqabadka shabakadda kale.
Xarumaha Xulashada waxay siin doontaa dabacsanaan weyn macaamiisha si loo yareeyo qulqulka.
Macaamiisha Emailka Casriga ah horay u sii socon doonaa iyadoo lagu saleynayo mudnaanta iyo caadooyinka akhriska.
Suuq-geynta Emailka way ballaadhi doontaa wixii ka dambeeya beddelaad ku timaadda gunta madadaalada waxaana la arki doonaa iyada oo aragti ka muujinaysa dusha sare ee masafada.
Walaac amni sii wadi doonaa in lagu hormariyo xaqiijinta iimaylka qaabab la mid ah DMARC.
Wearables waxay u oggolaan doontaa akhrinta emaylka u baahan qaababka naqshadeynta wax ka qabashada badan.
Tags: 2015sagxadda musqushawac talaaboistaraatijiyad email isku xidhanctaemaylka iyo arrimaha bulshadamacaamiisha emailka ahhawlgelinta emaylkaemail hashtaginfographic emailEmail Marketingemaylka suuqgeynta suuqgeyntaemail suufiyadoodiihagaajinta emaylkaamniga emaylkakhadadka mawduuca emaylkahashtagsinternet ee waxsuuq-geynta suuqaqalabyada suuq-geynta suuqaistaraatijiyad fariinbartilmaameed yarxarumaha dookhasoocelinta waxyaabahaammaankadusha sare ee funnelwearables